Mpanamboatra fitaovana famenon-tsakafo - Wisepowder BLOG
2021 Magnesium L-threonate Ho famerenana ny vatan'ny famaritana Nootropic tsara indrindra
Inona ny Magnesium L-threonate? Ny magnesium L-threonate (778571-57-6) dia misongadina ho endrika pilina pilina manezioma azo tsentsina be indrindra eny an-tsena ankehitriny. Ny magnesium dia mineraly iraisana izay misy [...]
Nicotinamide Mononucleotide (NMN): Tombontsoa, ​​fatra, famoahana, fikarohana
Ny antony ilantsika ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Na dia tsy azo ihodivirana aza ny fahanterana dia misy ny fanantenana hampihemotra ny fizotrany, noho ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN). Ny miaina amin'ny fahanterana masaka dia nofinofin'ny tsirairay [...]
Janoary 27, 2021
Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC): Ny famoahana tsara indrindra ho an'ny fananganana vatana
Ny atao hoe Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) Glycine Propionyl-L-Carnitine dia manondro ny karazam-borona mifamatotra molekiola ao amin'ny propionyl-L-carnitine sy ny glycine asidra amine. Izy io dia voakilasy ao amin'ny fianakaviana mitovy amin'ny Carnitine [...]
Pterostilbene Vs Resveratrol: Iza amin'ireo tsara kokoa ho an'ny fahasalamanao?
Rehefa mampitaha an'i Pterostilbene Vs Resveratrol ianao dia ho tsapanao fa maro ny zava-misy tsy hitanao momba azy roa. Ny fiainana fiainana salama dia mitaky ny hevitrao a [...]
Janoary 24, 2021
Oleoylethanolamide (OEA): zava-mahadomelina enta-mavesatra izay manampy amin'ny fanaraha-maso ny fampiharana
Inona ny Oleoylethanolamide (OEA)? Oleoylethanolamide (OEA) dia mpandrindra voajanahary amin'ny lanjany, kolesterola ary ny fahazotoan-komana. Ny metabolite dia mifangaro amin'ny habetsahan'ny tsinay kely. Tompon'andraikitra ny molekiola voajanahary [...]
Olona an-tapitrisany any no mandany vola be amin'ny vokatra anti-anti-agea toy ny Nicotinamide Riboside chloride. Na dia fizotry ny natiora aza ny fahanterana dia tsy te ho antitra fotsiny ny olona. [...]
Sakafo azo avy amin'ny lalivay mena: Tombontsoa, ​​fatra sy sakana
Inona no alaina masomboly masirasira mena (RYRE) namboarina rehefa karazana bobongolo manokana fantatra amin'ny anarana hoe Monascus purpureus manondrana vary. Nanjary mena mainty ny vary [...]
Janoary 14, 2021
Tombontsoa sy fampiharana amin'ny tongolo mainty ny tongolo mainty
Inona ny nalaina avy amin'ny tongolo mainty? Ny fakana tongolo lay mainty dia karazana tongolo lay izay nalaina avy tamin'ny fanamasinana sy fahanton'ny tongolo lay vaovao. Ny fitsaboana ny tongolo lay vao [...]
Anandamide (AEA): izay rehetra ilainao ho fantatra
Inona ny Anandamide (AEA)? Ny anarana Anandamide (AEA) dia avy amin'ny teny Ananda izay midika hoe mamokatra fahasambarana. Izy io dia endocannabinoid izay voasokajy ao amin'ny vondrona amides asidra matavy. Ara-drafitra, [...]
Tombontsoa 10 momba ny fahasalamana amin'ny glutathione ho an'ny vatanao
Glutathione dia mandray soa amin'ny zavamananaina amin'ny lafiny maro amin'ny alàlan'ny fihetsika antioksida. Izy io dia fitambaran'ny asidra amine misy ao amin'ny sela olombelona rehetra. Ny zavamananaina rehetra dia manana glutathione amin'ny vatany. [...]
Janoary 5, 2021
11 Fahasoavana ara-pahasalamana amin'ny famatsiana Resveratrol
Inona no atao hoe Resveratrol? Resveratrol dia fitambaran'ny zavamaniry polyphenol voajanahary izay miasa toy ny antioksidan. Ny loharanom-pahalalana resveratrol dia misy divay mena, voaloboka, voaroy, voanjo ary sôkôla mainty. Toa betsaka io fitambarana io [...]
Janoary 4, 2021
Ny torolàlana farany amin'ny Quercetin
Inona no atao hoe quercetin? Quercetin (117-39-5) dia an'ny vondrona fitambarana antsoina hoe flavonoid. Ny anarany simika dia 3, 3 ′, 4 ′, 5,7-pentahydroxyflavone. Izy io dia pigment izay misy voajanahary amin'ny legioma, voankazo, [...]
Momba ny Wisepowder
WISEPOWDER dia mifantoka amin'ny fikarohana, ny famokarana ary ny fanavaozana ny akora ho an'ny sakafo hanina nootropika sy ny sakafon-tsakafo. Izahay dia mpanamboatra sakafo ara-tsakafo matihanina sy mpamatsy akora mpiorina akora, mpamatsy akora ary vokatra biochemical.
Fialana andraikitra: Tsy manao fanambarana momba ny vokatra amidy amin'ity tranonkala ity izahay. Tsy misy fampahalalana omena an'ity tranonkala ity izay nohamarinin'ny FDA na MHRA. Izay fampahalalana omena ato amin'ity tranonkala ity dia omena araka ny fahalalantsika azy ary tsy natao hanolo ny torohevitry ny mpitsabo mahay iray. Ny fijoroana vavolombelona na ny vokatra momba ny vokatra nomen'ny mpanjifanay dia tsy fijerin'ny wisepowder.com ary tsy tokony horaisina ho toy ny tolo-kevitra na zava-misy. Copyright © WISEPOWDER Inc.
Username na mailaka *
Hiroso amin'ny fandoavam-bola View ny hovidiana